Fambolena sy fiompiana : tsy ampy ny fiaraha-midinika eto amintsika | NewsMada
Fambolena sy fiompiana : tsy ampy ny fiaraha-midinika eto amintsika
Par Taratra sur 07/02/2018
Raharahan’ny rehetra ny fandraisana andraikitra ho amin’ny fampiroboroboana ny fambolena sy ny fiompiana. Tsy ampy ny fiaraha-midinika eto amintsika, tantsaha, mpandraharaha ary ny fanjakana, ho amin’izany sehatra iankinan’ny fampandrosoana lehibe izany. Efa nisy fotoana nanatanterahana izany, ohatra, ny Agrinnova, saingy tsy hita ny fitohizan’ny asa.
Nasiana resaka tamin’izany fotoana izany ny fiompiana, ho fampitoboana ny isan’ny dokotera mpitsabo biby. Mazava loatra, tsy afa-misaraka amin’ny fambolena, noho izany, ny fiompiana. Faritra Melaky izao, ohatra, tsy ahitana taratara amin’izany fampiroboroboana ny fambolena izany, nefa malaza amina fiompiana omby. Lasa anjakan’ny dahalo fotsiny ny halatra omby, miteraka tsy fandriampahalemana any amin’iny faritra iny.
Inona ny vahaolana hiatrehana izany ? Tokony hisy ny drafitrasa vaovao hanomezan-danja ny fiaraha-miasa maharitra amin’izay rehetra voakasika : tantsaha, vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana, mpitandro filaminana, mpandraharaha, sy izay manana tetikasa mifandray amin’izany fambolena sy fiompiana izany.
Zahana avokoa izay mety hahazoana famatsiam-bola sy hisarihana hatrany ny sehatra tsy miankina ; tohizana ny fikarohana ; ny fomba rehetra hahafahana mamokatra tsy tapaka sy izay hanohanana ny fandraharahana amin’ireo sehatra roa ireo, iankinan’ny fiveloman’ny Malagasy maro anisa indrindra.